Chii Chinonzi Kuberekwazve? Bhaibheri Rinotii?
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikaonde Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Lingala Lithuanian Low German Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mambwe-Lungu Mutauro Wemasaini wokuColombia Myanmar Nepali Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Turkish Turkmen Ukrainian Venda Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Chii Chinonzi Kuberekwazve?
Shoko rekuti “kuberekwazve” rinoreva kutanga kweukama hutsva pakati paMwari nemunhu wacho anenge aberekwazve. (Johani 3:​3, 7) Mwari anogamuchira vaya vanenge vaberekwazve kuti vave vana vake. (VaRoma 8:15, 16; VaGaratiya 4:5; 1 Johani 3:1) Kungofanana nevaya vanotorwa zviri pamutemo kuti vave vana vemumwe munhu, mamiriro ezvinhu evaya vanenge vaberekwazve anochinja, vobva vava nhengo dzemhuri yaMwari.​—2 VaKorinde 6:18.
Nei munhu achifanira kuberekwazve?
Jesu akati: “Kana munhu asina kuberekwazve, haagoni kuona Umambo hwaMwari.” (Johani 3:3) Saka kuberekwazve kunoita kuti munhu akodzere kuzotonga naKristu muUmambo hwaMwari. Umambo uhwu hunotonga huri kudenga, saka Bhaibheri rinorondedzera “kuberekwazve” richiti ndiko kunoita kuti munhu azowana nhaka ‘yakachengetwa kudenga.’ (1 Petro 1:​3, 4) Vaya vanoberekwazve vanoitwa kuti vave nechivimbo chekuti ‘vachatonga pamwe chete semadzimambo’ naKristu.​—2 Timoti 2:12; 2 VaKorinde 1:21, 22.
Munhu anoberekwazve sei?
Jesu paakataura nezvenyaya yekuberekwazve akati vaya vanoberekwazve ‘vaizoberekwa nemvura nemweya.’ (Johani 3:5) Mashoko iwayo anoreva kubhabhatidzwa mumvura kunoteverwa nekubhabhatidzwa nemweya mutsvene.​—Mabasa 1:5; 2:1-4.
Jesu ndiye wekutanga kuberekwazve. Akabhabhatidzirwa muRwizi rwaJodhani, Mwari achibva amuzodza (kana kuti kumubhabhatidza) nemweya mutsvene. Saka Jesu akabva aberekwazve nemweya mutsvene semwanakomana waMwari wemweya aiva netariro yekudzokera kunoraramazve ari kudenga. (Mako 1:9-11) Mwari akazadzisa tariro iyi nekumutsa Jesu sechisikwa chemweya.​—Mabasa 13:33.
Vamwe vanoberekwazve vanotangawo vabhabhatidzwa mumvura vasati vagamuchira mweya mutsvene. * (Mabasa 2:38, 41) Kana zvadaro vanenge vava netariro yechokwadi yekuti vachanorarama vari kudenga, iyo ichazadziswa naMwari pavanomutswa.​—1 VaKorinde 15:42-49.
Zvinofungwa nevamwe panyaya yekuberekwazve
Zvavanofunga: Munhu anofanira kutanga aberekwazve kuti aponeswe kana kuti ave muKristu.
Chokwadi nezvenyaya iyi: Chibayiro chaKristu hachingounzi ruponeso pane vaya chete vanoberekwazve avo vachazotonga naKristu kudenga asiwo pane vaya vachatongwa neUmambo hwaMwari pasi pano. (1 Johani 2:1, 2; Zvakazarurwa 5:9, 10) Boka iroro rechipiri revaKristu richava nemukana wekurarama nekusingaperi muParadhiso pasi pano.​—Pisarema 37:29; Mateu 6:9, 10; Zvakazarurwa 21:1-5.
Zvavanofunga: Munhu anogona kusarudza kuberekwazve.
Chokwadi nezvenyaya iyi: Munhu wese ane mukana wekuti ave shamwari yaMwari uye kuti awane ruponeso. (1 Timoti 2:3, 4; Jakobho 4:8) Kunyange zvakadaro, Mwari ndiye anosarudza vaya vanoberekwazve, kana kuti vanozodzwa nemweya mutsvene. Maererano nezvinotaurwa neBhaibheri, kuti munhu azoberekwazve ‘hazvibvi pachido chine munhu kana zvaanoedza kuita, asi zviri kuna Mwari.’ (VaRoma 9:16) Mashoko ekuti “kuberekwazve” anogonawo kushandurwa kuti “kuberekwa kubva kumusoro,” zvichisimbisa pfungwa yekuti kusarudzwa kwevaya vanozoberekwazve “kunobva kumusoro,” kana kuti kuna Mwari.
^ ndima 5 Koneriyasi nevamwe vaaiva navo ndivo chete vakagamuchira mweya mutsvene vasati vabhabhatidzwa mumvura.​—Mabasa 10:44-48.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Chii Chinonzi Kuberekwazve?
ijwbq nyaya 107